साहित्य – CBKhabar.com | Nepali News Portal
By सन्दीप खत्री / breaking, समाचार, साहित्य
माघ १५ । हरेक वर्षको पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिन सुरू हुने हिन्दू धर्मावलम्बीको श्री स्वस्थानी ब्रतकथा तथा माधवनारायणको पूजा आराधना आजदेखि सुरू भएको छ। प्रत्येक वर्ष पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म एक महिनासम्म हरेक दिन घरघरमा स्वस्थानी कथा भन्ने र सुन्ने गरिन्छ। स्वस्थानी परमेश्वरीको ब्रत बसे तथा उनको कथा भने र सुने मनोकांक्षा पूरा …
आजदेखि स्वस्थानी ब्रतकथा सुरू विष्तृतमा
By सन्दीप खत्री / समाचार, साहित्य
अरुलाइ दिनुपर्ने रकमले आफ्नै खल्ती भर्ने खजान्चे हरु, मै खाउ मात्र मै लाउ मन्त्र जप्ने पापी ती कथित मान्छे हरु, यस्ले त भोका लाई पेटभरी खान दिन्छ भनी भान्सा मा पठायो, खानु सम्म खाए लुकाए अघाएनन राज्यका अगस्ति भान्छे हरु। संगम सापकोटा ,तनहुँ
आज महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जयन्ती मनाइँदै
कार्तिक २९ । आज विभिन्न कार्यक्रम गरी महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको १ सय १२ औँ जन्मजयन्ती मनाइँदैछ । महाकवि देवकोटाको जन्म विसं १९६६ सालको कार्तिक कृष्ण औँसी अर्थात् लक्ष्मीपूजाका दिन काठमाण्डौको डिल्लीबजारमा भएको थियो । दश वर्षका उमेरमा कविता लेख्न सुरु गर्नुभएका देवकोटाका थुप्रै महाकाव्य, खण्डकाव्य, निबन्ध, कथा, नाटक, उपन्यास, गीत, समालोचना र फुटकर कविता प्रकाशित …
आज महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जयन्ती मनाइँदै विष्तृतमा
अक्षयकोषका लागि पत्रकार पराजुलीले दिए ५ हजार
कार्तिक २८ । गोरखापत्रका चितवन संवाददाता एवम कुमाता कथासङ्ग्रहका लेखक तथा पत्रकार वसन्त पराजुलीले नानी बिवु फाउन्डेसनलाई सहयोग गर्नुभएको छ । पराजुलीले आज उक्त फाउण्डेशनको अक्षयकोष स्थापनार्थ ५०००। पाँच हजार रुपैयाँ ) संस्थाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद पराजुली र साहित्यक सर्जक नानी बिवुलाई प्रदान गर्नुभएको हो । गैंडाकोट निवासी स्रस्टा बिवुको अनुक्रोश उपन्यास प्रकाशित छ । पराजुलीले …
अक्षयकोषका लागि पत्रकार पराजुलीले दिए ५ हजार विष्तृतमा
By Editor CB Khabar / साहित्य
आरति आचार्य हातमा न्यायीक तराजु बोकेर , न्यायलयको ढोकामै ठिङ्ग उभिएका , मेरा बराजुजस्ता लाग्ने , MY LORD ! तिम्रो न्यायको व्यापार खुब फस्टाएछ। तर अफशोच ! हाम्रा मुस्कानहरु तिम्रो न्याय किनेर, उन्मक्त हाँसो हाँस्नै सक्दैनन् । सत्यको बाटो हिँड्छु भन्दै , गीता छोएका तिम्रा हातहरुले , थप पवित्रा र सीता पनि छोए रे! साँच्चि …
By सन्दीप खत्री / breaking, बिचार, समाचार, साहित्य
सन्दीप खत्री लगभग ७ वर्षको बालक । टाउको पुरै खौरिएको । विद्यालयको चौरलाई आफ्नै घरको आँगन सम्झिएर रुँदै यताउता दौडिरहेको दृश्यले एक्कासी मेरो ध्यान तान्यो । के कुरामा उसलाई चित्त बुझिरहेको थिएन आफू भन्दा केही उमेर बढीको बालिकासँग रोएर आफ्नो माग पुरा गर्दै थियो । एकछिन उ अर्थात अर्जुन जुग्जालीसँग कुरा गर्ने चाहना नभएको होईन …
मराङको मर्का विष्तृतमा
आरति आचार्य ताकम, ४ जेठ । दूर दूर पहाडको कन्दरामा, मुर्झाउन अाँटेको उनिउँ देख्नु भयो भने, सम्झनुस् त्यो म नै हुँ। अाफ्नै माटोमा, अलिकति देश र अलिकति विदेश मिसाएर , कोही कक्टेल बनाइरहेको छ भने , सम्झनुस् त्यो म नै हुँ। अाफ्नो बेचिएको हात, पाउ र स्वाभिमान फिर्ता लिन कोही दयाको याचना गरिरहेछ भने , …
सन्दीप खत्री समय कति बलशाली हुँदो रहेछ, विश्वजगत कोरोना भाइरसले त्राहिमाम नै बनाएको छ । मानिसहरु घरभित्र थुनिएर वस्नु पर्ने बाध्यता छ । कोरोना भाइरसका कारणले अनगिन्ती नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । तथापि यतिबेला कोरोनाले पारेको नकारात्मक प्रभाव भन्दा पनि सकारात्मक प्रभावलाई हेरेर चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था छ । यतिबेला मैले पनि कोरोनाले मेरो जीवनमा …
उपहार “समय” विष्तृतमा
सन्दीप खत्री होमस्टे भन्दा साथ अर्गानिक खानाको याद आउँछ र होमस्टेमा विशेषगरी अर्गानिक नै खान पाईन्छ पनि । पछिल्लो समयमा नेपालमा अर्गानिक खानाकै कारण धेरै आन्तरिक पर्यटकको रुपमा नेपालीहरुमा होमस्टे घुम्ने बानी बसेको छ । पूर्वदेखि पश्चिम सम्मका मानिसहरु घुम्ने क्रममा ठूला होटलको तुलनामा होमस्टे खोजी खोजी पुग्ने गरेका छन् । त्यही क्रममा हाम्रो पनि …
भकुण्डेको सम्झना विष्तृतमा
म्याग्दीका चित्रकारहरुको टोड्केमा लाइभ पेन्टीङ
By Editor CB Khabar / breaking, मनोरञ्जन, समाचार, साहित्य
बेनी, १७ फागुन । म्याग्दीको मंगला, रघुगंगा गाउपालिका र बेनी नगरपालिकाको सिमा क्षेत्रमा अवस्थित पर्यटकीय स्थल टोड्केको प्राकृतिक सौन्दर्यता चित्रमा उतारेका छन् । म्याग्दीका चित्रकारहरुले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को अवसर पारेर टोड्केमा पुगेर स्थलगत चित्र तयार (लाइभ पेन्टीङ) गरेका हुन् । चित्रकार अमृत श्रीपाली र सुरेन्द्र रानाको अगुवाइमा स्थलगत चित्र तयार पारिएको हो । …
म्याग्दीका चित्रकारहरुको टोड्केमा लाइभ पेन्टीङ विष्तृतमा
मध्यरातमा संसद विघटन गर्दै कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा मध्यावधि चुनावको मिति घोषणा १७ फाल्गुन २०७६, शनिबार १८:२५
सांसदहरु दोहोरिएपछि प्रधानमन्त्रीमा ओली र देउवाको दाबी नपुगेको राष्ट्रपतिको ठहर १७ फाल्गुन २०७६, शनिबार १८:२५
आज मात्रै २१४ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु १७ फाल्गुन २०७६, शनिबार १८:२५
नवलुरमा थप १० दिन निषेधाज्ञा लम्ब्याइयो १७ फाल्गुन २०७६, शनिबार १८:२५
कोरोनाबाट चितवनमा एकैदिन १५ जनाको मृत्यु १७ फाल्गुन २०७६, शनिबार १८:२५